Angola: Fifidianana an-tsary maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2008 20:15 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Português, Français, Español, Italiano, 日本語, Swahili, English
Andro manokana ho an'i Angola ny andron'ny zoma 05 Septambra. Nazoto hifidy ireo mpikambana vaovao ao amin'ny Parilemanta tao anatin'ny 16 taona izao ny vahoaka taorian'ny fampielezan-kevitra mafotaka iny. Ity moa no fotoana voalohany ho an'ny maro hanararaotany mampiasa ny zony hifidy. Namonjy ny biraom-pifidianana mahatratra 12 000 eo ho eo ampilaminana ny maro, saingy mbola mitohy moa ny fifidianana ho an'ny biraom-pifidianana mahatratra 320 ao an-drenivohitra Luanda, noho ny olana teo amin'ny fitaovana omaly izay niteraka ny fanemorana ny famoahana ny vatom-pifidianana.
Efa manomboka miseho lany ato amin'ny tontolom-bolongana moa ny fanehoan-kevitra sy ny tatitra samihafa, ary efa feno tokoa izany. Na izany aza dia indreto misy sary vitsivitsy maneho fa manantantara ity andro ity, sary misoratra amin'i José Manuel Lima da Silva, mpampiasa ny Flickr antsoina hoe Kool2bBop, dia manome izao fanamarihana izao:
Mbola maro ny sary azonao jerena ao amin'ny tahirintsary flickr an'i Tiago Sousa sy iSam.Seyffert momba ity andro lehibe ity.
20 Aogositra 2020Mediam-bahoaka